Izishaya indlwabu zesilisa ezihamba phambili nezinzuzo zazo | Amadoda aSitayela
IsiJalimane Portillo | 19/05/2021 09:53 | Izithandani Nezocansi
Bekulokhu kucatshangwa ukuthi amathoyizi ocansi alungele abesifazane kuphela. Kodwa-ke, kubonakala sengathi umbono wokuthi umuntu angazisebenzisa futhi lezi zinto, ukwelule ukusetshenziswa kwawo kulolu hlobo. Ngemuva kokuvalelwa ekhaya ngenxa yokudluliswa kwegciwane ngonyaka odlule, amadoda amaningi abenesikhathi esithe xaxa sokukwazi ukuhlangabezana nezici ezahlukahlukene emkhakheni wezocansi. Enye yazo ukusetshenziswa kwe- indlwabu zesilisa. Abesilisa bebelokhu bezama lezi zinhlobo zamathoyizi avusa inkanuko futhi babe nemiphumela emihle.
Kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi yiziphi izishaya indlwabu ezingcono kakhulu zesilisa ezingatholakala kungxenyekazi ekhethekile Ehlukahlukene.
1 Izindlwabu zesilisa
2 Izinzuzo zokusebenzisa indlwabu zesilisa
3 Amathoyizi ocansi ahamba phambili
3.1 Ukwanelisa ngohlobo lowesilisa
3.2 Iqanda lokushaya indlwabu
3.3 Izandla mahhala
3.4 Okungokoqobo kakhulu
Kusukela ukuvalelwa ekhaya ngenxa yokusabalala kwegciwane, amathoyizi ocansi abesilisa aqale ukuthengiswa ngesilinganiso esikhulu. Izindlwabu Zabesilisa Baqale ukuthengisa ama-40% ngaphezulu kunakuqala. Kujwayelekile ukucabanga ukuthi lezi zinhlobo zamathoyizi azikufaneli, ngoba ucabanga ukuthi ungaphezu kokwanele ukuzizwa futhi unike injabulo embhedeni. Kodwa-ke, ngokuqhubekayo kusuka eqinisweni akuhlangene nokujabulela ngezindlela ezihlukile. Kwesinye isikhathi esikufunayo kuyisikhuthazi esihlukile esisenza sibe nemizwa emisha. Lokhu kuzosho ukuthi ukusebenzisa amathoyizi ocansi kuzosilulaza njengamadoda uma kukhulunywa ngokusebenza embhedeni.
Kukhona lokho shiya emuva ubandlululo nezinkolelo zomphakathi ukuze uthokozele ezocansi kakhulu. Ungaqala ukusebenzisa ithoyizi lezocansi elisebenza ukuzama. Ngaphezu kwalokho, kulula ukuqala okuncane, ngoba okulula kungaba mnandi kakhulu futhi kungakusiza uthole ukuzwa okusha.
Izinzuzo zokusebenzisa indlwabu zesilisa
Futhi ukuthi awukwazi ukubona izingqinamba kulolu hlobo lwemikhiqizo. Ukusetshenziswa kwethoyizi locansi kuhlotshaniswa nenani elikhulu lenzuzo. Phakathi kwabo siyathola ukwanda kwe-libido, ukwaneliseka ngokocansi, kanye nama-orgasms angcono. Kumele kukhunjulwe ukuthi amadoda anezindawo zocansi esingazazi ngoba asizisebenzisi nokuthi uma sisebenzisa abesilisa abashaya indlwabu sifeza lezi zinhlobo zobumnandi ezingaziwa kuze kube yileso sikhathi. Ungakuqhathanisa nabantu abathanda ukudla kakhulu kodwa abakudla nsuku zonke. Ngale ndlela, ungagcina izinga lokuzijabulisa eliphakeme lapho ubhekene nokwehluka kwemizwa abangakunikela ngayo.
Uma oshaya indlwabu besetshenziswa njengombhangqwana, izinzuzo ziyanda. Isizathu esisodwa salokhu ukuthi ukuthanda inkanuko kuyathandwa, kungaphuma enkambisweni futhi kuthuthukise isibopho nabashadikazi. Okuhle kunakho konke, ungathuthukisa amandla akho embhedeni futhi uthathe isikhathi eside ukuya kwi-orgasm. Enye yezinkinga ezinkulu zamadoda amaningi yilokho Abakwazi ukulawula ukuvuka kahle futhi bakujabulele kakhulu kangangokuba bafinyelela ku-orgasm ngaphambi kwesikhathi sabo. Ngamathoyizi ocansi singafunda ukulawula ikhono lokugcina i-orgasm kangcono kakhulu ngaphandle kokuyeka ukujabulela.
Ochwepheshe abaningi bezocansi bancoma ukusetshenziswa kwamathoyizi ocansi ukuvimbela ukukhishwa ngaphambi kwesikhathi.
Amathoyizi ocansi ahamba phambili
Njengoba sishilo ngaphambili, ipulatifomu ye-Diversual inenani elikhulu lamathoyizi ocansi kanye nezitho zobulili zabesilisa lokho kungenza impilo yakho yezocansi ithuthuke kakhulu. Ithoyizi eliyintandokazi alinakutholwa uma ungavuli ingqondo yakho bese uqala ukuzwa injabulo ngenye indlela.
Ake sibone ukuthi yimaphi amathoyizi ocansi ahamba phambili ngokuya nge-Diversual:
Ukwanelisa ngohlobo lowesilisa
Phakathi kokuhle kakhulu Amathoyizi ahlukahlukene sinenguqulo yesilisa yeSanelisi. Kuningi okushiwo ngalo mkhiqizo kunguqulo yabesifazane futhi kunikeze okuningi okuzokhulunywa ngakho. Manje siphendukela kumlingani wakhe wesilisa. Into yokuqala okufanele uyicabangele ngohlobo lokukhuthaza olifunayo. Uma usaqala, unokuthile okuzenzakalelayo, okwenziwa ngesandla, uma uzoyisebenzisa njengezithandani, njll. Ngakho konke lokhu, ukuhlukahluka okukhona kufanele kubonwe kahle. Igama lakhe eligcwele ngu I-Satisfyer Men Heat Vibration Male Masturbator futhi ibiza ngo- € 43.80.
Ngale divayisi ungalingisa ucansi lomlomo futhi ungalungiswa ngokushesha okukhulu ekushiseni komzimba. Ibuye ibe nomsebenzi omangalisayo wokudonsa, ukukhiqiza ukushisa, njll. Ngalokhu ungajabulela kahle futhi ufinyelele i-orgasm ngokweneliseka okukhulu.
Iqanda lokushaya indlwabu
Leli qanda le-masturbator lingenye yezimpumelelo kakhulu emakethe. Kumele uvule iqanda, ususe igobolondo bese ufaka igrisi. Isitayela ngasinye iqanda le-masturbator elinakho ukuthungwa okwehlukile okuzokunikeza isikhuthazo esiphelele. Kubiza u- € 8 kuphela, ngakho-ke kufanelekile.
Kubo bonke labo abathanda ucansi lomlomo, kukhona ithoyizi elizinikele lezocansi kubo. Ubizwa ngegama I-Autoblow 2 Plus XT Usayizi B futhi inentengo ngo- € 123.30. Ifanisa kahle yonke imizwa esinayo ngesikhathi socansi lomlomo ngendlela engokoqobo futhi ezenzakalelayo. Kuthule kakhulu futhi kuhlolwe ukusetshenziswa kwamahora angaphezu kwama-500. Inesistimu egadiwe eyenza ukunyuka phezulu naphansi ngokwayo. Ibuye ibe namahora wemikhono eguquguqukayo ngosayizi abathathu abahlukene. Kulolu hlobo lwesidingo, kungumkhiqizo ophelele impela.
Elinye ithoyizi elikuvumela ukuthi ujabulele ngaphandle kwamabhethri noma izintambo yiPDX Mega Bator USB Male Masturbator White Vagina. Inentengo yama-euro ayi-116 futhi iyithuluzi elithinta inkanuko kuqinisekisa umuzwa ongokoqobo impela. Inezinhlobo eziningana zamaphethini wokukhishwa ahlukile ukusuka ekufinyeleleni ku-15. Ingakhokhiswa ngokuxhumeka kwe-USB futhi kuthatha isikhathi esincane kakhulu.
Kulabo abafuna okuthe xaxa, le divayisi iphelele ngoba isebenza ngezindawo eziyisi-3 eziyinhloko ze-anatomy yabesilisa: amasende, indawo ezungezile nephoyinti P. Ibizwa nge-Vibrator O Boy 7 Speeds Black Male P-Point Massager futhi kubiza ama-euro angu-39.30 kuphela. Ingasetshenziswa yodwa noma njengombhangqwana futhi iphelele ukuvuselela noma iyiphi indawo yomzimba wakho.
Ngiyethemba ukuthi ngalaba bantu abashaya indlwabu ungayijabulela ngokugcwele impilo yakho yezocansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Ziqeqeshe ngamadoda ashaya indlwabu ukuze uthuthukise ubulili bakho